Global Voices teny Malagasy » Mahazo Fanohanana Antserasera Ny Filoha Am-perinasa Tadjik · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Septambra 2013 0:07 GMT 1	 · Mpanoratra Alexander Sodiqov Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Tajikistan, Fifidianana, Mediam-bahoaka
Raha nanjary anisan'ny voalohany nokendrena hihomehezana ao amin'ny aterineto  ny filoha Emomali Rahmon ao Tajikistan, mikasika ny fifidianana amin'ny 6 Novambra, nahazo fanohanana tsy nampoizina avy amin'ireo mpiserasera sasantsasany ity miaramila menavazana teo aloha ity. Enina herinandro latsaka alohan'ny handehanana hifidy filoham-pirenena, nilaza ireo bilaogera marobe fa hifidy an'i Rahmon izay efa nitondra ny firenena nanomboka tamin'ny taona 1992 izy ireo.
Tao amin'ny bilaogy ASIA-Plus, Alisher Ko nilaza  [ru] fa “tsy mila filoha hafa afa-tsy i Emomali Rahmon” i Tajikistan:
Hoy ilay bilaogera nanampy  [ru]:
Misy zavatra hafa ihany koa. Tokony ho tompon'andraikitra manokana amin'ny hoavin'ny firenentsika ny filoha. Mila “de Gaulle ” [jeneraly sy filoham-panjakana Frantsay, filoha voalaza fa olo-be ao amin'ny Frantsa moderna] antsika manokana isika, izay mitàna ny demokrasia amin'ny tanana iray ary sabatra amin'ny tanana hafa, ka hampiasa [ny sabatra] amin'ny tsy fahombiazana sy ny gaboraraka izay mitondra ho amin'ny firodanan'ny Fanjakana. Tokony ho liona no sady fosa ny filoha… Tsy misy olona mahafeno ireo fepetra ireo kokoa noho i Emomali Rahmon.
Mpanoratra ao amin'ny bilaogy hafa, “Russkaia Letopis’ Tadzhikistana” [Ireo vaovao rosiana ao Tajikistan], nanazava  [ru] ny antony hifidianany ny filoha menavazana ao Tajikistan:
Zavatra hafa mihitsy kosa no manosika ilay bilaogera Tojikzaminazy hanohana ny filoha ankehitriny. Hoy izy nanoratra  [tj]:
Koa na dia eo aza ny buzz (laza) amin'ny media sosialy momba ny fisian'ny kandidà filoham-pirenena vehivavy voalohany  Oynikhol Bobonazarova ao Tajikistan, mahazo fanohanana avy amin'ireo mpiserasera ao amin'ny firenena ihany koa ny filoha am-perinasa ankehitriny. Mbola lehibe kokoa izany fanohanana izany eo amin'ireo vondrona mpifidy maro an'isa Tajikistani izay monina ivelan'ny faritra andrenivohitra ary tsy manana aterineto. Araka ny filazan’ ny mpanoratra ity lahatsoratra ity ao amin'ny bilaoginy manokana, tsy mahafantatra ireo kandidà hafa ankoatra an'i Rahmon ny ankamaroan'ny mpifidy ao Tajikistan ary tsy miraharaha fifidianana mihitsy. Noho ireo manampahefana miezaka mafy mitàna izao fandeha-javatra izao , azo antoka fa handresy mora foana amin'ny fifidianana hoavy i Emomali Rahmon
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/30/52262/
 nanjary anisan'ny voalohany nokendrena hihomehezana ao amin'ny aterineto: https://globalvoicesonline.org/2013/09/25/with-outcome-foretold-tajik-elections-spark-online-ridicule/
 de Gaulle: http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
 buzz (laza) amin'ny media sosialy : https://globalvoicesonline.org/2013/09/20/woman-can-become-president-only-when-men-die-out-in-tajikistan/
 kandidà filoham-pirenena vehivavy voalohany: http://www.cacianalyst.org/publications/field-reports/item/12811-tajik-opposition-parties-nominate-female-candidate-president.html